YEYINTNGE(CANADA): Friday, May 09
မနေ့ညနေ၆နာရီ၌Tronto Myanmar Soccer Club တွင်ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသို့
BURMA BUDDHIST ASSOCIATION OF ONTARIO
MENTION "BURMA CYCLONE RELIEF"
More information: ASHIN (416) 747 7879
ZAW ( 416)538 2318
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/09/20080အကြံပြုခြင်း
မုန်တိုင်းဘေးလွတ်လာသူ ရွာသား ၂ ဦး၏ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်
ယခုလ ၂ ရက်နေ့ညက ပြင်းထန်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ကြီးမားသည့် ရေလှိုင်းများသည် ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကံကောင်းသဖြင့် အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ၂ ဦးက သူတို့၏ ကျန်မိသားစုဝင် အားလုံးနှင့် ကျေးရွာသားများသည် အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးတွင် ကြေကွဲဖွယ်ရာ သေဆုံးခဲ့ပုံနှင့် ကူသူကယ်သူမဲ့ ဖြစ်နေသည့် လက်ရှိ အခြေအနေကို ရင်ဖွင့် ပြောဆိုထားပါသည်။
မအဲလေး (၁၂ နှစ်)
ချမ်းသာကြီးကျေးရွာ အမှတ် (၁)
“သမီး လပွတ္တာကို ရောက်တာ မနက်ပိုင်းမှာ ရောက်တာ။ လမ်းမှာတင် ၄-၅ ရက် ကြာသေးတယ်။ မိုင် ၁ဝ လောက် ကုန်းကြောင်း လျှောက်ရတာ။ ကယ်ဆယ်ရေးလည်း မလာဘူး။ လပွတ္တာ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းကို မထားဘဲ မြောင်းမြကို ပို့ဖို့လုပ်တာ။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်အသိတွေဆီကို လာရတာ။ မြောင်းမြကို တပ်မ ၆၆ က စစ်သားတွေက ပို့မယ်လို့ ပြောတယ်။ စစ်သားတွေက ရုတ်ရုတ်လုပ်ရင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ပြောတယ်”
“သမီးက ရန်ကုန်ကို ရောက်တာ ၂ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တညထဲနဲ့ လူတွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးတယ်။ အရမ်းကို အံသြတယ်။ အရမ်းကို ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သမီး မိဘတွေ အကုန်သေတယ်။ ညဘက်ကြီး လေမုန်တိုင်း တိုက်တဲ့အခါမှာ အကုန်လုံး သွပ်ပြားတွေ ကျွတ်ထွက်ပြီးတော့ သမီးက သစ်ပင်ပေါ်မှာ ချိတ်နေတယ်။ သမီး သတိရတော့၊ သစ်ပင်ပေါ်မှာ ခုန်ဆင်းတော့ လယ်ကွင်းထဲမှာ အလောင်းတွေ အများကြီး တွေ့တယ်။ သမီးက အလောင်းတွေကို ရှောင်ပြီးတော့ ရွာကို ပြန်တော့ ရွာတောင် မမှတ်မိဘူး။ သစ်ပင်တချို့ပဲ ကျန်တယ်။ သစ်ပင်တွေက အရွက်တောင် မကျန်တော့ဘူး”
“လမ်းမှာ ဘာမှ မစားခဲ့ရဘူး။ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ မရှိဘူး။ လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေက အကုန် ဈေးတက်နေတယ်။ လမ်းမှာ ၄ ရက်လောက် အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့တယ်။ အုန်းသီး ခွဲစားရတယ်၊ အုန်းရည် သောက်ရတယ်။ ရွာကနေလာတော့ ရေလည်း ရှားတယ်။ ဆန်တွေကလည်း ရေစိုနေတဲ့ ဆန်တွေကို အုန်းရည်တွေနဲ့ ချက်စားရတယ်”
“သမီးမှာ အမေ၊ အဖေနဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေ သေတော့ အရမ်း ဝမ်းနည်းတယ်။ အားလည်း ငယ်တယ်။ ဆွေမျိုးတွေ စုပေါင်းနေတာ အယောက် ၄ဝ လောက်ရှိတယ်။ သမီး မိသားစုက ၁ဝ ယောက်ရှိတယ်”
ကိုခင်မောင် (၄ဝ နှစ်)
“အခြေအနေကတော့ အရမ်းဆိုးတယ်။ ကျနော်တို့ ခံရတာက ရွာလုံးကျွတ်ပဲ အကို။ ကျနော့် မိသားစုက တယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ ကျနော့် မိသားစု ၁ဝ ယောက်ရှိတာ တယောက်ပဲ ကျန်တယ်။ ၉ ယောက်ကတော့ သေသွားပြီ။ မုန်တိုင်းထဲမှာပဲ ပါသွားတယ်။ ဆွဲနေရင်းနဲ့ပဲ ပါသွားတာ။ မုန်တိုင်းက အရမ်းကြမ်းတယ်။ ကျနော့် မိသားစုတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်း ဘာတခုမှ မရဘူး။ ဇာတ်လမ်း ပြီးသွားပြီ”
“ကျနော့် ဆွေမျိုးတွေ လပွတ္တာမှာ မကျန်တော့ဘူး။ အိမ်ထဲမှာပဲ မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရင်းနဲ့ လှိုင်းဒဏ်နဲ့ မိသားစုတွေ အကုန်လုံး ပါသွားတယ်။ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်မှာ ဒီလို မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရတာ မကြုံဖူးပါဘူး။ ရေဒီယိုတို့ ဘာတို့ နားထောင်တာ ဓလေ့ မရှိဘူး။ တာဝန်ရှိတာက သက်ဆိုင်ရာက တာဝန်ရှိတယ်။ ပြည်သူလူထုကို ဘာမှ နှိုးဆော်တာ မရှိဘူး။ မုန်းတိုင်းဖြစ်မှ ခါးစည်းခံလိုက်ရတဲ့ သဘောပဲ”
“လေတိုက်လာတော့မှ မုန်တိုင်းကျတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒီလိုမျိုး မကြမ်းဖူးတော့ ဘယ်သူမှ မထင်ဘူးပေါ့။ လေဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ အိမ်မှာပဲ စုနေကြရတာပေါ့။ ရေ ဒီလောက်ကြီးမယ်ဆိုတာလည်း မသိဘူး။ ရေတက်တဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှ မခံနိုင်ဘူး။ ရှိတဲ့ ရွာတွေ၊ အိမ်တွေ ရေထဲမှာ အကုန်ပါသွားတယ်။ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေ အကုန်လုံး ပါသွားတယ်”
“ကျနော်တို့ မနေ့က ၈ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိ ဘာအကူအညီမှ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာ ကယ်ဆယ်ရေးမှ မလာဘူး။ ဘာအကူအညီမှ မရပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မလာဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ကယ်နေရတာပါ။ လပွတ္တာမှာ ကျေးရွာပေါင်း ၃၆၅ ရွာ ရှိတယ်။ ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၅၆ အုပ်စု ရှိတယ်။ မုန်တိုင်းထဲ ပါသွားတဲ့ ကျေးရွာက ၃ဝဝ လောက်ရှိမယ်။ မေလ ၄ ရက်နေ့အထိက လပွတ္တာမြို့ပေါ်က ကုန်သည်တန်းက ကောက်ထားတာကတော့ (လူဦးရေ) ၁၂၆ဝဝဝ ကျော်သွားပြီ။ နောက်စာရင်း မပါသေးဘူး။ ကယ်ဆယ်ရေး မရှိတဲ့အတွက် ရေတဗူးတောင် မသောက်ခဲ့ရဘူး”
“မြို့ပေါ်က ပြည်သူတချို့ကနေပြီးတော့ ဆန်လှူ၊ ဆန်ကွဲလှူနဲ့ အဲဒါကို ဆန်ပြုတ် ပြုတ်သောက်နေရတယ်။ ရေတို့ တခြား စားစရာတွေကတော့ အဆင်မပြေဘူး။ ကျန်မာရေး အခြေအနေက သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒီကနေ့ မနက် ဖုန်းဆက်တော့ ကလေး ၃ ယောက် ဝမ်းရောဂါနဲ့ သေသွားပြီ ကြားတယ်”
“လေမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာလာတယ်။ မုန်တိုင်းနှင့် ပါလာတဲ့ အက်ဆစ်မိုးဒဏ်ကြောင့် လူတွေရဲ့ အသားအရေတွေ ပျက်စီးသွားတယ်။ လူတော်တော်များများရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ အဆီပြင်တွေ ပေါ်နေတယ်။ မီးရောင်လို့ အရေးပါးတွေ ဖောင်းပွနေတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အရေပါးက အပေါ်ယံ အလွှာ မရှိတော့ပဲနဲ့ အောက်မှာ အဆီပြင်တွေ အဆီဝင်းဝင်းကြီးတွေနဲ့ လေဘေးဒုက္ခသည် တော်တော်များများ တွေ့ရတယ်။ မိုးရေကို ခံသောက်တော့လည်း အငံတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ရေလည်း သောက်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒုက္ခ တော်တော် ရောက်တယ်။ အက်ဆစ်မိုးတွေ ထိတဲ့ သူက ရာဂဏန်းလောက် ရှိမယ်”
“အဲဒီ မိုးစက်တွေက မီးစနဲ့ ထိုးသလို ဖြစ်နေတယ်။ မိုးရေက ဝါးကို ထိရင်တောင် မီးပွင့်တယ်။ လူတော်တော်များများက၊ ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေသူက တွေ့တယ်။ လူတွေကလည်း ကြောင်တောင်တောင်လို ဖြစ်နေကြတယ်။ မိသားစုလိုက်တွေ ပါသွားတယ်ဆိုတော့၊ ဆယ်နေရင်းနဲ့ ပါပါသွားတာတွေ ဆိုတော့၊ လက်ကို တယောက်နဲ့ တယောက် ကိုင်ထားရင်းနဲ့ သူက လွတ်သွား၊ ငါက လွတ်သွားသူတွေချည်းပဲ ဆိုတော့ ရီရမှန်းလည်း မသိ၊ ငိုရမှန်းလည်း မသိ ကြောင်တောင်တောင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးတဲ့အတွက် ကြောင်တောင်တောင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တော်တော် ထိခိုက်သွားတယ်”
“ကမ်းနားမှာ ဒုက္ခသည်တွေ တက်လာရင် သင်္ဘောဆိပ်က နေပြီးတော့ တပ်မ ၆၆ ကနေပြီးတော့၊ စောင့်ပြီးတော့၊ လာတဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ တခြား မြို့တွေကို ခွဲပို့နေတယ်။ လပွတ္တာ မြို့ပေါ်ကို အတက်မခံတော့ဘူး။ တခါထဲ ဆင်း၊ တခါထဲ တက်ဆိုပြီးတော့ အဲလို ပို့ပေးနေတယ်။ မြောင်းမြ၊ ပုသိမ်၊ ဝါးခယ်မတို့ကို ပို့ပေးနေတယ်”
“(လပွတ္တာ) မြို့ပေါ်မှာလည်း ဒုက္ခသည်တွေ တက်နေတဲ့အတွက် နေစရာ မရှိတော့ဘူး။ လပွတ္တာမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၃ဝ ကျော်မှာလည်း အကုန် ပြည့်နေတယ်။ ကျောင်းတွေမှာလည်း လူတွေ ပြည့်နေတဲ့အပြင်၊ လမ်းဘေးတွေမှာလည်း လူတွေ နေကြတယ်။ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာ အရိပ်မရှိ ဘာမရှိနဲ့ တော်တော် ဆိုးဝါးနေတယ်။ ရွာတွေကလည်း မရှိတော့ အဲလို ဖြစ်သွားတယ်”
အမေရိကန် လေယာဉ် ၀င်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
May 10th, 2008 by admin
ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ထားသော အမေရိကန် စစ်ဘက် လေယာဉ်တစီးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တင်္နလာနေ့တွင် ၀င်ရောက် ဆင်းသက်ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်ကို ကိုးကားပြီး ရိုက်တာ သတင်းတရပ်က ဖော်ပြသည်။
လေဘေးထောက်ပံရေး ပစ္စည်း အာဏာပိုင်တွေ သိမ်းတဲ့အတွက် ကုလ အကူအညီရပ်ဆိုင်းရ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူအညီတွေကို စစ်အစိုးရက သိမ်းယူသွားတဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာပြည်ကို ပို့ပေးနေတဲ့ အရေးပေါ်အကူအညီတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးပို့မယ့် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီ လေယဉ်နှစ်စင်းစာကို ထိမ်းသိမ်း ထားလိုက်တယ်လို့ WFP ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ စစ်အစိုးရဘက်က ရိက္ခာတွေကို သိမ်းဆည်းနေတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြေရှင်းနိုင်သေးသ၍ နောက်ထပ် ပို့မယ့် ရိက္ခာတွေကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားရလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့မှာ တခြား ရွေးချယ်စရာလမ်း မရှိတဲ့အကြောင်းလည်း WFP အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထောင်သောင်းချီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရေး နိုင်ငံခြားက အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေကို လက်မခံခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို စစ်အစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပိုပြီး ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေကို လက်ခံဘို့ သဘောတူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အကူအညီတွေကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဖြန့်ဝေမယ်၊ ကိုယ်ပိုင် အင်အားကို သုံးပြီး ဖြန့်ဝေမယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ပြည်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကို လာရောက်ခွင့် ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်း နှစ်သောင်းသုံးထောင် လောက် သေဆုံးပြီး လေးသောင်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေဟာ လူပေါင်းတစ်သိန်းလောက်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အရာရှိတွေက သတိပေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့ခံတဦးက “ရွာတွေပျောက်တယ်။ တနေ့ကဆိုရင် ကော့မှူးချောင်းထဲကနေ မိခင်ကြီးတယောက် ကလေးပိုက်ရက်သား ပေါ်လာတာတွေ့တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ကျွဲ၊ နွားတွေ ထက်ပိုင်း ပြတ်တယ်၊ သစ်ပင်တွေလည်း အကုန်လဲတာပေါ့ဗျာ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နောက်မုန်တိုင်းတခု လာနိုင်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ သတိပေး
နောက်ထပ် မုန်တိုင်းတခု မြန်မာပြည်ကို ဦးတည်လာနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ယနေ့ သတိပေး ကြေညာလိုက်ကြောင်း AFP သတင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
၎င်းမုန်တိုင်းမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ နာဂစ် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းနောက်မှ ဖြည်းညင်းစွာ ရွေ့လျားလာသော နာက်ဆက်တွဲ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပြီး အခြေအနေ အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူဦးရေ ၁.၅ သန်းခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူ ၁ သိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရသဖြင့် မုန်တိုင်းဆိုသည့် အသံကပင် မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အလွန် ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရစ်ချတ် ဟိုဆေးကပြောသည်။
“ကျနော်တို့ မိုးလေဝသ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ လာမယ့် ၇ ရက်အတွင်း မြန်မာပြည်မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ဟိုဆေးက AFP သို့ ပြောကြားလိုက်သည်။
“လူတွေမှာ အမိုးအကာမရှိတဲ့အချိန် နောက်ထပ်မိုးသည်းထန်မယ့် ကိစ္စက တော်တော် ကြီးမယ့် ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“ရေကြောင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ပျံ့နှံ့နိုင်တာနဲ့ အမိုးမရှိတာနဲ့ မုန်တိုင်းထပ်လာဦးမှာနဲ့….။ နောက်တခါ မုန်တိုင်းထပ်လာလို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသကိုဝင်ခဲ့ရင်…ပြဿနာကတော့ အကြီးကြီးပဲ” ဟု၎င်းကပြောသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်စွာ နေခဲ့သော မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို အစောပိုင်းကာလက လက်ခံမည်ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ အပါအဝင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများကို လက်ခံရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေ။
“အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မြန် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ မလုပ်ဘူး ဆိုရင် မကြာခင်လာမယ့် ဆိုင်ကလုံန်းကြောင့် နောက်ထပ် လူတွေအများကြီး သေရဦးမယ်” ဟု ဟိုဆေးက ပြောသည်။
ယခုအချိန်သည် မြန်မာပြည်၌ မုတ်သုန်ရာသီ အစပျိုးချိန်ဖြစ်သောကြောင့် မိုးသက်မုန်တိုင်းများ ကျရောက်ကာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလေ့ရှိသော အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။
“မုန်တိုင်းမလာလည်း မိုးရာသီကစပြီ။ အမိုးမရှိတဲ့အိမ်တွေကတော့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ရ ဦးမှာပဲ” ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ခိုင်လုံသော မိုးလေဝသ သတင်းရပ်ကွက်တခု၏ အဆိုအရ မြန်မာပြည်သို့ နာဂစ်မုန်တိုင်း မဝင်ရောက်မီ အစောပိုင်း အိန္ဒိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် သတိပေးကြေညာစဉ် ကတည်းက မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းလွင်က ပြင်းထန်သည့် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း နေပြည်တော်သို့ အကြောင်း ကြားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
သို့ရာတွင် နေပြည်တော်မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြည်သူလူထု အထိတ်တလန့်ဖြစ်မည် စိုးသောကြောင့် ၎င်းသတင်းကို ကြေညာခြင်းမပြုရန် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Myanmar to hold nationwide constitutional referendum on Saturday
YANGON, May9(Xinhua) -- A nationwide referendum onadraft constitution will be held in Myanmar on Saturday as scheduled, with people across the country set to go to poll, except those residing in the declared natural-disaster-hit regions. As 40 townships in Yangon division and7in the southwestern Ayeyawaddy division are under declared natural-disaster-hit regions status, ballot casting in these areas is postponed toafortnight later on May 24.
According to official estimation, there isatotal population of 57 million in the whole of Myanmar with up-to-age population, or eligible voters, accounting for about 27 million.
Of the country's 57 million population, Yangon represents7million, while Ayeyawaddy6million.
According to the constitutional referendum law, it allows free and secret casting of votes on the draft constitution and open counting of the votes to ensure the referendum be free and fair.
The polling booths are set to close at4p.m. (local time), after which ballot counting will be done.
According to the draft constitution, the constitution draft can be ratified with the majority votes-in-favor out of the votes cast by over 50 percent of eligible voters.
The 194-page 15-chapter 2008 Republic of Union of Myanmar Constitution was drafted by the 54-member State Constitution Drafting Commission in accordance with the detailed basic principles laid down by the National Convention.
The National Convention originally started in 1993 but first adjourned for eight years from April 1, 1996 to May 16, 2004, and formally resumed on May 17, 2004.
The referendum on the new constitution draft constitutes part of the military government's seven-step roadmap announced in 2003.The next step is to holdamulti-party democracy general election in 2010 to produce parliament representatives to hand over power toademocratically elected civil government.
Meanwhile, relief and resettlement work is underway in cyclone-hit areas and international relief aid is also coming in.
UN humanitarian chief urges getting aid into Myanmar quickly
·UN humanitarian chief on Thursday warned ofa"worse tragedy" if failing to do so.
·Ban is attempting to talk to Senior General Than Shwe to urge him to facilitate access.
·there had beenalittle bit of progress in gaining access to the country.
UNITED NATIONS, May 8 (Xinhua) -- The United Nations humanitarian chief on Thursday underlined an urgency to get international aid into cyclone-hit Myanmar, warning ofa"worse tragedy" if failing to do so.
"There'sareal danger that an even worse tragedy may unfold if we cannot get the aid that's desperately needed in quickly," John Holmes, undersecretary-general for humanitarian affairs, toldaUN briefing.
He said that while there had beenalittle bit of progress in gaining access to the country since he last briefed the press yesterday, much more was needed in terms of the granting of visas and easing of regulations, given the "increasingly desperate situation" on the ground.
"Frustrations have been growing that this humanitarian response is being held back because of difficulties of access in different ways," he said, noting that many visas are still pending.
"I do appeal very strongly indeed to the government of Myanmar both to step up their own relief efforts to help people on the ground and to change their attitude completely to the efforts that we are making to get these relief supplies in," he said.
He added that UN Secretary-General Ban Ki-moon is attempting to talk to Senior General Than Shwe to urge him to facilitate access.
Meanwhile, the UN chief said he has noted the government's decision to proceed with the constitutional referendum scheduled for May 10, while postponing it in some of the areas most affected by the cyclone.
"Due to the scope of the disaster facing Myanmar today, however, the secretary-general believes that it may be prudent to focus instead on mobilizing all available resources and capacity for the emergency response efforts," saidastatement issued by Ban's press office.
Rice Gains, Extends Rally on Export Curbs, Myanmar Crop Damage
By Rattaphol Onsanit and Luzi Ann Javier
May9(Bloomberg) -- Rice rose, heading for the biggest weekly gain since reachingarecord last month, as Nigeria and the Philippines sought to buy more, further straining global supplies afteracyclone devastated crops in Myanmar.
The Philippines, the world's largest importer, is in talks with rice exporters Thailand and Vietnam, National Food Authority spokesman Tomas Escarez said today. Nigeria, the second-largest buyer, wants 500,000 metric tons from Thailand, said Bhartendu Pandey,atrader at Thai Maparn Trading Co.
Rice has jumped 7.4 percent this week on the Chicago Board of Trade. Flooding fromaMay3cyclone may limit Myanmar's main rice crop. Rice, wheat, corn and soybeans have risen to records this year, prompting the United Nations to call for emergency aid to relieveaglobal food crisis that has caused riots from Haiti to Egypt.
``The cyclone damage in the country has again highlighted tight global supplies of rice,'' Kenji Kobayashi, an analyst at Kanetsu Asset Management Co., said by telephone from Tokyo today. ``The rice price is now set to retest the previous peak.''
Rice futures for July delivery rose 15 cents, or 0.7 percent, to $22.50 per 100 pounds at 12:40 p.m. in Chicago, after earlier rising the exchange's daily limit of $1.15 to $23.50. The trading limit was increased twice after gains of 75 cents yesterday and 50 cents on May 7. The most-active contract, which has more than doubled in the past year, reachedarecord $25.07 on April 24.
Nigeria, the world's second-largest rice importer, on May7suspended levies on imports for six months and offered subsidized seedlings to farmers to curb rising food prices.
Thailand, the world's largest supplier, is the only shipper that hasn't curbed exports this year as the World Food Programme warned ofa``silent famine'' caused by spiraling food prices. Palm oil also has risen to records this year on increased demand from consumers and investors.
Money invested in funds tracking the two most popular commodity indexes jumped 48 percent so far this year, Sanford C. Bernstein & Co. said April 30. Investments following the Standard & Poor's GSCI index and Dow Jones-AIG Commodity Index have risen to $250 billion from $169 billion at the start of the year.
French Agriculture Minister Michel Barnier on May7urged limits to speculation in food-related commodities. India banned futures trading in commodities including chickpeas.
Corn rose toarecord $6.39abushel today on the Chicago Board of Trade, and soybeans surged3percent as of 12:41 p.m. to $13.49abushel. Wheat for July delivery fell 22 cents, or 2.7 percent, to $8abushel. Wheat still is up 70 percent in the past year.
Grain prices are rising as the U.S. Department of Agriculture estimates about 33 percent of the nation's corn will be used for fuel including ethanol during the next decade, up from 11 percent in 2002.
Rice ``will go up further,'' said Thai Maparn's Pandey, speaking by phone from Bangkok. ``India and Vietnam are not going to supply anything.''
India's Commerce Secretary G.K. Pillai told reporters today that India, the world's second-biggest rice producer after China, may partly ease its ban on overseas sales.
Thailand agreed yesterday to sell 500,000 tons of rice to Malaysia.
The Philippines was in talks with Thailand and Vietnam for long-term contracts that would allow the National Food Authority to buy the staple through government-to-government agreements, possibly eliminating the need for more tenders this year, spokesman Escarez said.
On May 5, the Philippines canceledatender to buy 675,000 tons of rice to build stockpiles after just one company submitted an offer. Japan offered to ship 60,000 tons of rice to the Philippines to help the nation resupply, Escarez said.
Philippine companies, including Jollibee Foods Corp., and farmers' cooperatives sought today to buy 21,560 tons of rice from Thailand and China, according to National Food Authority Assistant Administrator Conrad Ibanez. That's less than 8 percent of the total of private-sector shipments allowed this year.
The damage from Cyclone Nargis in Myanmar's main rice- growing area has stoked speculation, including from the Thai Rice Exporters Association, that the country may be forced to abandon exports and seek supplies on the international market.
Myanmar Exports Threatened
Myanmar had been expected to export 600,000 tons of rice this year, the Food and Agriculture Organization has said. The Rome-based United Nations agency had forecast world rice exports at 29.9 million tons.
The five provinces that bore the brunt of the typhoon account for about two-thirds of the nation's rice output. The storm flooded 5,000 square kilometers (1,930 square miles) of farmland in the Irrawaddy delta.
Rice may exceed $30 per 100 pounds in Chicago, Kanetsu's Kobayashi said.
Still, ``I don't see that this rally in rice prices will be sustained,'' said Simon Roberts, head of agricultural commodities at ANZ Banking Group Ltd. ``You'll seeasupply response at some point to these prices.''
U.N. 'furious' as Myanmar aid 'seized'
BANGKOK, Thailand (CNN) -- Aid agencies are furious over the Myanmar government's refusal to allow them to distribute food and supplies flown in for cyclone disaster victims.
The ruling military junta has been allowing planes to land, but is not letting the cargo be distributed by most foreign aid workers, especially those from Western nations.
The United Nations issueda"flash appeal" Friday to raise $187.3 million in cyclone relief for Myanmar based assessments by more than 20 organizations. It includes $56 million for food, nearly $50 million for logistics and about $20 million for shelter.
The Asia head of the U.N. World Food Program said Friday that the government had seized the contents of two flights that arrived in the morning at Yangon which carried enough food for 95,000 people. They contained 38 tons of high-energy biscuits, medical kits and other items.
"We off-loaded the food, and then the authorities refused us permission to take that food away," WFP director Tony Banbury said.
"We were told we neededaspecial letter from the Minister of Social Welfare. We hand-deliveredarequest to him. The answer back was 'No, you can't have the food.'
"That food is now sitting on the tarmac doing no good. I'm furious. This is unacceptable."
In response, the U.N. temporarily suspended its emergency airlifts.
However, the WFP -- which under U.N. rules must control and distribute its aid supplies -- said later that it would try to send more aid on Saturday.
"The World Food Program has decided to send in two relief flights as planned tomorrow, while discussions continue with the government of Myanmar," spokeswoman Nancy Roman said.
Despite earlier reservations, Myanmar has now agreed to allow one American cargo aircraft to land with relief supplies on Monday, White House Deputy Press secretary Gordon Johndroe said Friday. Watch how some aid is getting through »
The United States had earlier proposed an aid plan that would minimize the presence of American troops on the ground, with the planes to drop supplies off and then turn around and leave.
The U.S. is also proposing that its Navy helicopters already in Thailand and onboard Navy ships in the region fly supplies to remote areas. The helicopters would conduct low-level flights and air-drop the supplies but not touch the ground.
Four U.S. Navy ships are now moving toaregion offshore Myanmar.
The Danish Red Cross said only one out of 10 people have received some kind of aid in the six days since the cyclone hit, The Associated Press reported.
"There are problems to get the aid inside (Myanmar) and there are problems to get the aid out to the delta area," director Anders Ladekarl told AP.
"We are simply lacking transportation. There are almost no boats and no helicopters. This is reallyanightmare to make this operation run."
Agencies such as the Red Cross, World Vision and Doctors Without Borders already had staff inside Myanmar before the cyclone hit, but have been struggling to get permission to bring in more, AP said.
As many as6million people lived in the Irrawaddy Delta, the low-lying region that bore the brunt of the storm. More than 2,000 square miles of land are under water. Look at satellite pictures of the damage by the flooding »
The Myanmar government says last week's cyclone killed 22,000 people, but the top U.S. envoy in the country says the death toll may exceed 100,000. Thousands are without food, shelter and clean water, and aid workers say boats and helicopters are needed to reach remote areas.
As the delivery of aid supplies lags, the possibility of diseases such as malaria rises, medical authorities say.
Friday's move by the Myanmar military government to stop aid workers distributing supplies came one day beforeanational constitutional referendum that would strengthen the power of the military junta.
The government delayed voting in areas most ravaged by last Saturday's cyclone, but, despite urging by U.N. General-Secretary Ban Ki-moon, refused to cancel the balloting countrywide. Ban told authorities it may be "prudent" to focus their resources on emergency response efforts.
Political observers note that Myanmar has been isolated from outside influences since the military began ruling the country in 1962.
Australian Prime Minister Kevin Rudd said the military junta in Myanmar has behaved "appallingly" by declining to grant more visas to relief workers.
"This has never happened before," he said Friday.
To complicate matters, Myanmar's embassy in Bangkok, Thailand -- where aid groups have been waiting for days for entry permission -- was closed Friday foraholiday.
မုန်တိုင်းဘေးလွတ်လာသူ ရွာသား ၂ ဦး၏ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြ...
Myanmar to hold nationwide constitutional referend...
UN humanitarian chief urges getting aid into Myanm...
Rice Gains, Extends Rally on Export Curbs, Myanmar...